"Ndị ọrụ Apple Apple nke Australia na-eji Apple akwụ ụgwọ karịa mba ọ bụla" | Esi m mac
Ndị Apple Apple Australia na-eji Apple akwụ ụgwọ karịa mba ọ bụla ọzọ "
José Alfocea | | Apple Ṅaa, ọtụtụ
Nnukwu ụlọ akụ Australia na-anọgide na-egbochikarị ịnakwere Apple Pay, sistemụ ịkwụ ụgwọ Apple na-akwụ ụgwọ kama, na, agabigala PayPal na United States usoro kachasị ewu ewu. N'etiti otu esemokwu a n'etiti ụlọ akụ na Apple, Onye osote onye isi ala Apple bụ Jennifer Bailey ejirila mkparịta ụka mee ihe iji gbakwunye ntakịrị mmanụ ọkụ.
Na nke a, Jennifer Bailey, osote onye isi ala Apple, azaala ndị esemokwu iwu a na-ebi na obodo koalas na kangaroos n'etiti Apple na isi ụlọ akụ Australia. O meela nke a site na iji ajụjụ ọnụ na AFR.com, ebe Bailey kpughere na ndị ahịa nọ n'Australia bụ ndị na-eji usoro ịkwụ ụgwọ kọntaktị (ịkwụ ụgwọ kọntaktị) na-etinye aka na Australia na-eji ọrụ ịkwụ ụgwọ kọntaktị ahụ karịa mba ọ bụla ọzọ, nakwa na ụlọ akụ ka aghọtachabeghị uru Apple Pay.
1 Gbanwee ụlọ akụ naanị maka iji Apple Pay
1.1 Statementsfọdụ nkwupụta "ikwu"
2 Apple ọ na-anwa ịme monopolize ọrụ ịkwụ ụgwọ kọntaktị?
Gbanwee ụlọ akụ naanị maka iji Apple Pay
Jennifer Bailey kwuru nke ahụ ndị ahịa dị njikere ịgbanwe ụlọ akụ iji jiri Apple Pay, na nke a kwesịrị inyere ụlọ ọrụ aka ịkpa ike na mkparịta ụka a na-eme na ụlọ ọrụ ụlọ akụ. Ọzọkwa, ruo taa, ụyọkọ ọzọ nke obere ụlọ akụ Australia amalitela ịkwado Apple Pay.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ Australia nke kwadoro Apple Pay maka ịkwụ ụgwọ na-enweghị kọntaktị bụ: Australian Unity, Catalyst Money, Customs Bank, Horizon Credit Union, Laboratories Credit Union Ltd., Nexus Mutual, Northern Beaches Credit Union, The Rock na UniBank. Na mgbakwunye, Apple ekwuputala na ụlọ akụ Macquarie Bank na ING Direct ga-adaba na Apple Pay tupu ọnwa agwụ.
Statementsfọdụ nkwupụta "ikwu"
Dịka ụfọdụ mgbasa ozi ekwuola, Ihe Jennifer Bailey kwuru na ndị ahịa Apple dị n'Australia na-eji Apple Pay ugboro ugboro karịa ndị ahịa ụlọ ọrụ na mba ọ bụla ọzọ, ha bụ, ma ọ dịkarịa ala, dịtụ mgbagwoju anya, n'echiche na ojiji zuru Apple Pay na mba ahụ dị obere, ebe ọ bụ na ụlọ akụ ndị isi jụrụ ịdebanye aha na ọrụ ahụ nke Apple. N’ezie, ha kọọrọ ndị omekome a na-asọpụrụ Apple na-asọpụrụ na asọmpi Australian na Asọmpi Ndị Ahịa na Ahịa.
Apple ọ na-anwa ịme monopolize ọrụ ịkwụ ụgwọ kọntaktị?
ANZ Banking Group bụ naanị ụlọ ọrụ ego na-akwado Apple ugbu a na mba Australia. Ndị fọdụrụ na nnukwu anoghi n'ulo oba na-na a iwu agha alleging na Apple na-unfairly monopolizing contactless ugwo ọrụ na iPhone.
Ndị ụlọ akụ rịọrọ ka ịnweta NFC ngwaike n'ime ngwaọrụ iOS iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ya mana Apple, na-enweghị atụ, jụrụ, ya mere ikpe ahụ ka na-emeghe.
N'ịbụ onye nwere àgwà nke ụlọ akụ Australia, Jennifer Bailey na-ekwu na ụlọ akụ niile dị n'ụwa ekwenyela iji Apple Pay na otu okwu, ma nyekwa ohere pụrụ iche na ngwaike NFC na ụlọ akụ Australia. ga-emebi iPhone ụdị nchedo.
Ọzọkwa, Bailey na-ekwu nke ahụ esemokwu iwu egbochila mkparịta ụka ezi uche dị na ya na ọnọdụ na uru nke ọrụ ahụ.
“N’oge mbụ, n’ọtụtụ ahịa, enweela ụlọ akụ ndị kpachapụrụ anya na mbụ maka iso ụlọ ọrụ buru ibu karịa Apple rụọ ọrụ, ozigbo ha bidoro iso anyị rụọ ọrụ ma ghọta usoro ịkwụ ụgwọ Apple Pay, ha hụrụ uru dị na ya. Nke ahụ emebeghị kpam kpam na ndị na-achọ ACCC, n'ihi na mkparịta ụka ahụ na-eme site na usoro ACCC, ma e jiri ya tụnyere ihe na-emekarị, nke bụ na anyị nwere mkparịta ụka ahụ bilate ọnụ.
Ga-abụ n'ọnwa Machị mgbe enwere mkpebi n'okwu a nke esemokwu a gbasara iwu. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ obere ụlọ akụ Australia na-agba nzọ na Apple Pay.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Ṅaa » Ndị Apple Apple Australia na-eji Apple akwụ ụgwọ karịa mba ọ bụla ọzọ "
N'ihi na ọ bụ naanị site na B. Santander ka enwere ike iji ya, ọbụnadị site na otu ụlọ akụ ya (ewepụrụ OpenBank, ọmụmaatụ)
Amphetamine, ihe kachasị mma maka kafiin ka Mac anyị ghara ihi ụra
Tim Cook na British Prime Minister kwurịtara banyere Brexit